Nofoanana Ny Zom-pirenen’Ireo Dominikana Mpiavy Haitiana 200.000 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2013 8:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Deutsch, Français, Español
[“#YouDon'tDoThat (tsy manao izany ianao): Manala ny Maha-Olom-pirenena ireo Dominikàna an'arivony”] Hetsika “Reconoci.do” [Nankatoavina]. Sary tao amin'ny pejy Facebookn'ny hetsika.
Nahasanganehana ny firaisamonina iraisampirenena ny didim-pitsarana Laharana.168-20 (PDF) [es] navoakan'ny Fitsarana Momba Ny Lalàmpanorenana dominikàna. Efa manomboka tsapa ihany koa ny fironana an-tendrony ao amin'ny firenena, tsy niandry ela ihany koa ireo adihevitra hita tamin'ny tambajotra media sosialy sy ny gazety.
Dominikana mpiavy Haitiana 200.000 farafahakeliny no tsy mizaka zom-pirenena noho ny didim-pitsarana manafoana ny maha-olom-pirenena ireo olona teraka tao amin'ny firenena sy ireo mpifindra-monina ka tsy manana sata ara-dalàna hatramin'ny taona 1929.
Namoaka lahatsoratra mampiady hevitra “The Pariahs of the Caribbean” [es] tao amin'ny El País ilay nahazo Loka Nobel momba ny Literatiora, Mario Vargas Llosa, izay nanaovany fampitahàna amin'ny fehezanteny momba ny lalàna Nazi sy ny Jiosy. Manasongadina ny fahasarotindrotiny ny Firenena Dominikàna amin'ity resaka fifindra-monina miafina ity ihany koa izy:
Miampy fihatsarambelatsihy ny habibiana sy ny tsy fitsinjovana ny maha-olona eo amin'ireto mpitsara ireto. Fantany tsara fa tranga ara-piarahamonina sy ara-toekarena manahirana sy mifangaroharo ny fifindra-monina “tsy araka ny tokony izy” na tsy ara-dalàna nataon'ireo Haitiana tao amin'ny Repoblika Dominikàna izay nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20, izay nampirisihan'ny tompon'ny velaran-tany goavana sy ny tompon'ny fandraharahana Dominikana mba hahazoana tombotsoa avy amin'ny asa mora vidy amin'ny fambolena fary tamin'izany fotoana izany – na ny marina kokoa, tamin'ny vanim-potoanan'ny firoboroboana. Izany rehetra izany dia tao anatin'ny fahalalàna tanteraka sy fandeferana avy amin'ireo manampahefana, izay mahafantatra tsara ny tombontsoa ara-toekarena azon'ny firenena […]
Tsy nankasitraka ny didy navoakan'ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana ihany koa ny fikambanana iraisam-pirenena Amnesty International sy ny Human Rights Watch.
Mpahay toe-karena sy mpahay tantara, Bernardo Vega, nanao fitarainana momba ity lohahevitra ity tamin'ny fandaharan'asa El Despertador [es] izay nilazàny fa:
Manana adidy ara-maoraly amin'ireo olona ireo tamin'ny fitondrana azy teto ny Fanjakana.
Rehefa avy nikaroka momba ny tantaran'ny firenena talohan'ny Ady Lehibe Voalohany mandrak'ankehitriny izy, dia navoitrany mazava tsara fa fantatry ny Repoblika dominikàna ny maha-tompon'andraikitra azy tamin'ireo tsy fanarahan-dalàna ireo.
Etsy andaniny, navoaka tamin'ny endrika samihafa ny lahatsoratra nosoratan'ilay mpahay tantara Rosario Espinal mitondra ny lohateny hoe Matanza Electoral [es] (Fandripahana ara-pifidianana). Navoaka tao amin'ny bilaoginy sy gazetim-pirenena maromaro ny lahatsoratra milaza fa mamaly noho ny tombontsoa ara-politika fa tsy noho ny ady ara-poko ny fepetra henjana noraisin'ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana:
Ny tanjona voalohany kendrena avy hatrany amin'ny fanafoanana ny zom-pirenen'ireo Dominikàna dia ny hanaisotra azy ireo ao amin'ny lisi-pifidianana, ka tsy hahafahan'izy ireo mifidy. Noho izany antony izany, mety efa noesorina tao anatin'ny bokim-panjakana izy ireo ary mba hanaovana izany, nanao hadisoana maro momba ny làlana ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana nanomboka izy tonga teo tamin'ny taona 1929. Nofoanan'izy ireo tao anatin'ny indray mipi-maso ny zon'izy ireo mifidy ary amin'izany, nampanao ho ara-dalàna ny tsy ara-dalàna. Indro ny rafi-dalampanorenana Dominikàna vaovao.
Na inona na inona anton'ireo didy, niely ny fitroarana. Tamin'ny 4 Novambra, niangona sy nanao diabe tao amin'ny faritra bateyes [fiarahamonina ambanivohitra miorina manodidina ny faritra mpamokatra siramamy] ny fikambanana Dominicanos y por el Derecho Dominicanas de la Región Enriquillo [Dominikàna ho amin'ny zo mahadominikana ny Faritra Enquillo], ary nilaza indray ny fitsipahan'izy ireo ny didy fanafoanana ny maha-olompirenena ireo Dominikàna mpiavy haitiana. Nanao fihetsikesehana manohitra ny didy ihany koa ireo fikambanana tsy miankina (ONG) sy mpikatroka ara-tsosialy marobe.
Nandritra izany, namerimberina hatrany ny teny filamatra tahaka ny hoe “Fahafatesana hoan'ireo mpamadika” sy ny hoe “Ry Zareo any, izahay ety” ny hetsika nasionalista vaovao tamin'ny hetsika nankalazaina tao amin'ny
Altar de la Patria, [es] [Alitaran'ny Tanindrazana] tamin'ny 5 Novambra. Niaro ny fiandrianam-pirenena mifototra amin'ny hevitra fototra hoe “atsy ho atsy, tsy hisy tanindrazana intsony” raha tsy arovana ny didy ireo mpikarakara ity fihetsiketsehana ity.
Tsy nahavita nampitony ny rano ny fihetsiky ny filoha Danilo Medino, tsy mahavita milaza fa manohitra ity fepetra ity ihany koa izy, nikarakara fivoriana ara-diplaomatika miaraka amin'ireo masoivoho am-polony izy ka nohazavaina tamin'izany ny olana momba ny didim-pitsarana.
Amin'izao fotoana izao, miandry fotsiny no azontsika atao raha mahatosika ho amin'ny fampivoriana ny vondrona samihafa ho fanitsiana ity didy laharana faha.168-2013 ity ny tsindry iraisampirenena sy ny fitokonana misy eo amin'ny firenena.